၀၅:၄၁၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ဝီကီပီးဒီးယား:Myanmarsar Help ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎‎[edit=autoconfirmed] (indefinite)‎[move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၂:၂၃၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ဝီကီပီးဒီးယား:Font ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎‎[edit=autoconfirmed] (indefinite)‎[move=autoconfirmed] (indefinite) (Excessive vandalism) (မှတ်တမ်း)
၀၅:၂၅၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က သိန်းစိန်၊ ဦး (နိုင်ငံတော်သမ္မတ) ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (Excessive vandalism) (မှတ်တမ်း)
၁၁:၂၈၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ရိုဟင်ဂျာ ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (High traffic page) (မှတ်တမ်း)
၀၅:၀၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Click ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၅:၀၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Index ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၄:၅၉၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Featured article ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၄:၅၈၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Featured photo ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၅:၂၇၊ ၈ မတ် ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:! ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၈:၅၀၊ ၇ မတ် ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (High traffic page) (မှတ်တမ်း)
၀၆:၀၁၊ ၃ မတ် ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Portal:ပထဝီ/Subportals ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (မှတ်တမ်း)
၀၅:၅၄၊ ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] ( ၀၅:၅၄၊ ၂၅ ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၁ (UTC) တွင် သက်တမ်းကုန်မည်) [move=autoconfirmed] ( ၀၅:၅၄၊ ၂၅ ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၁ (UTC) တွင် သက်တမ်းကုန်မည်) (Unregistered Users change pages non-standard encoding) (မှတ်တမ်း)
၀၉:၀၈၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉ ဗဟိုစာမျက်နှာ အတွက် ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=sysop] (indefinite) (Propose by Wikipedian for Category page change.) (မှတ်တမ်း)
၁၈:၃၂၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ တမ်းပလိတ်:Contents အတွက် ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=sysop] (indefinite) (To give flexibility to regular contributors) (မှတ်တမ်း)
၀၂:၄၁၊ ၅ ဇွန် ၂၀၀၉ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Zawgyi Unicode ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite) (Excessive vandalism)
၀၆:၅၂၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က အောင်ဆန်း ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) (မှတ်တမ်း)
၀၉:၄၁၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Index ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၀၉:၄၁၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Contents ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၁၆:၅၇၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:·w ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၁၆:၅၆၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Nowrap end ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၁၆:၅၆၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Nowrap begin ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၀၉:၀၀၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ဝီကီပီးဒီးယား:စတိုင်လ်လက်စွဲ ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) (မှတ်တမ်း)
၀၁:၃၇၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Mbox ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၀၁:၃၇၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Namespace detect ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=sysop:move=sysop]) (မှတ်တမ်း)
၀၁:၃၇၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က တမ်းပလိတ်:Inuse ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) (မှတ်တမ်း)
၂၁:၄၅၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ဝီကီပီးဒီးယား:ဆောင်းပါးများကို တည်းဖြတ်ခြင်း ကို ကာကွယ်ခဲ့သည် ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) (မှတ်တမ်း)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/protect/Zawthet" မှ ရယူရန်